ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ဖြတ်တံ ၁၀ ခု Sc | ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ကတ်ကြေးမှန်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကမ္ဘာကြီးကိုခြားနားစေသည်။ ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်၊ ဆံပင်ညှပ်သူများနှင့်အိမ်တွင်းဆံပင်အလှပြင်ဆိုင် ၀ န်ဆောင်သူများအတွက်ထိပ်ဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေး ၁၀ ခုစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးလိုက်သည်။
ဤဆောင်းပါး၌၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာမနီ၊ ဂျပန်နှင့်အခြားဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုအကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးအကျီင်္များ ၀ ယ်ရန်၊ ဆံပင်ညှပ်ရန်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးအမျိုးအစားတစ်မျိုးအတွက်မည်သည့်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါမည်။
အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ဆုံး ၁၀ ခု
ဆံပင်ဖြတ်တောက်ရန်5ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်
Australiaစတြေးလျကို အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဆံညှပ် ၁၀ ခုမှဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကို ၀ ယ်နိုင်သည် ထိပ်တန်းအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးအတွက်, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဖောက်သည် ratings, ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူသမိုင်း နှင့် ဂုဏ်သရေ, ပြီးနောက် ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး.
ဂျာမန် Chrome သံမဏိ
Sharp ဂျပန်ခုံး Edge Blade
ဂျာမန် Micro Serration Blade ကို
Ichiro K10 ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်
အရည်အသွေးမြင့် VG10 သံမဏိ
ဆံပင်ညှပ်သောကတ်ကြေးတစ်စုံကိုမဝယ်ယူမီ၊ ၎င်းဆံပင်ပုံစံသည်သင့်ဆံပင်ပုံသဏ္willာန်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ရန်လိုသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆံပင်ကတ်ကြေးများ ၀ ယ်သောအခါသင်သိထားရန်လိုအပ်သည့်အရာများအကြောင်းဖော်ပြသည်။
အွန်လိုင်းမှာဆံပင်ကတ်ကြေးပြန်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရင်းကမှားယွင်းတဲ့အရွယ်အစားကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်ကတ်ကြေးတစ်စုံဟာ offset သို့မဟုတ် ergonomics crane ဖြစ်တဲ့အခါပညာရှင်တွေတောင်မှမှန်ကန်တဲ့အရွယ်အစားကိုရဖို့အခက်တွေ့နေတယ်။
အကယ်၍ သံသယဝင်လျှင်၊ ဆံပင်ညှပ်သူများအများစုနှင့်လိုက်ဖက်။ ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်နည်းများကိုအကျယ်ဆုံးသော ၆ လက်မအရွယ်ဆံပင်ဖြတ်စက်ကိုသင်မှာယူနိုင်သည်။
Over The Comb ကဲ့သို့သောဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက် ၇ လက်မအရွယ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များအသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ တိုတောင်းသော ၅.၅ လက်မအရွယ်ကတ်ကြေးများသည်တိကျသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းစနစ်များအတွက်ပိုကောင်းသည်။
က Short Blade ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
တိုတောင်းသောဓါးသွားနှင့်အတူဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအရွယ်အစားအကြားရှိပါတယ်;4"လက်မနှင့် 5.5" လက်မ။
ရှည်လျားသော Blade ဆံပင်ညှပ်
တိုတောင်းသောဓါးသွားနှင့်အတူဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအရွယ်အစားအကြားရှိပါတယ်;6"လက်မနှင့် 7.5" လက်မ။
သွား ၃၀ မှ ၄၀ အထိပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုချည်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆံပင်ကိုဖြေးညှင်းစွာကျဲစေနိုင်သည်။ ဤသည်ကိုသင်ကြီးမားသောတုံးချွတ်ကြဘူးသေချာ။
သင်ကသွား 40 texturising ကတ်ကြေးနှင့်အတူရှည်လျားထူထပ်သောကောက်ကောက်ဆံပင်ကိုရှောက်သွားသောအခါ, ဤ chomping ပါးလွှာကတ်ကြေးဤမျှအသုံးဝင်သည်အဘယ်ကြောင့်သင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက် ergonomics နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလက်ကိုင်အမျိုးအစားအနည်းငယ်ရှိသည်။
cuttingစတြေးလျတွင်ဆံပင်ညှပ်သောကတ်ကြေးများနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုထားသောလက်ကိုင်များမှာအများဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကသင့်ကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည့်အောက်ခြေလက်စွပ်ကိုအနည်းငယ်ညှိသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြတ်တောက်နေစဉ် ergonomics သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
Classic Scissor Handles များကိုဆန့်ကျင်ခြင်း
ဆန့်ကျင်ဘက်လက်ကိုင်လက်ကိုင်ပုံစံသည်ယနေ့ခေတ်တွင်အသုံးပြုသောရှေးအကျဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ သူတို့ကအနည်းဆုံးမျှ ergonomics ကိုမပေးသော်လည်းဆံပင်ညှပ်သူများကိုအချိန်တိုအတွင်းတွင်နှစ်သက်သည်။
Crane Ergonomics သည်အခြေခံ offset ergonomics မှနောက်ထပ်ခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားပိုမိုနက်ရှိုင်းသော offset ရှိသည်, အောက်ခြေလက်စွပ်ကိုထိပ်ကနေတွန်း။ ၎င်းသည်ဆံပင်ညှပ်စဉ်ကာလအတွင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြတ်တောက်သောလူများအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။
၎င်းကိုအခြားလက်ကိုင်များနှင့်တူညီသည်။ ၎င်းကို lefty use အတွက်လုပ်သည်။ lefty ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဝဲဘက် offset၊ ရိန်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောလက်ကိုင်ဒီဇိုင်းများကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်သည်မည်သည့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအမျိုးအစားကို ၀ ယ်ယူရန်မသေချာလျှင်အောက်ပါအသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
အမျိုးသမီးဆံပင်ညှပ်သမားများ - ၅.၅ လက်မအရွယ်အစားရှိသောအတိုပြားများပါသောကတ်ကြေးများ
ဆံပင်ညှပ်သမားများ: ၆ လက်မ offset ဓါးတို ကပျကြေး
အမျိုးသမီးဆံ - ၆ လက်မမှ ၆.၅ လက်မရှည်သောဓါးဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်
အထီးဆံ: 6.5 "မှ 7.5" လက်မရှည်ရှည်ဓါးညှပ် offset
ထိပ်ဆုံးဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အညှပ် ၁၀ ခု
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများ၏အကြံဥာဏ်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိပ်တန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ရှင်များစာရင်း ၁၀ ခုကိုပြုစုပြီးဖြစ်သည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားနှင့်ဆံပင်ညှပ်မှဆံပင်ကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုသည် JaguarJuntetsu၊ Kamisori, Ichiro နှင့် Yasaka အကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်အတွေ့အကြုံသည်။
1. Yasaka Offset ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး
ဘဏ်ကိုမချိုးဖဲ့သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဂျပန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ The Yasaka Offset ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးသည်သြစတြေးလျတွင်အကောင်းဆုံးအညှပ်ညှပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများကအခြားဂျပန်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်း၏အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနှင့်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများအတွက်ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
တရုတ်မှာလုပ်တဲ့ကျပန်း pop-up တံဆိပ်တွေနဲ့မတူတာက Yasaka အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိ Premium Hitachi ဂျပန်သံမဏိဖြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
✔️ Sharp ဂျပန်ခုံး Edge Blade
✔️ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် offset ergonomics
Yasaka ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဂျပန် Nara တွင် ၁၀၀% ဂျပန်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်ဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ပါ ၀ င်ငွေအသက်သာဆုံးပရီမီယံဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား offset ညှပ်သူတို့ရဲ့ပရီမီယံအရည်အသွေး, မျှမျှတတဒီဇိုင်းနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ergonomics များအတွက်လူကြိုက်များကြသည်။ နံပါတ် (၁) သည်ဂျပန်ကတ်ကြေးအရောင်းရဆုံး
Yasaka Offset ကတ်ကြေး
2. Jaguar Jay2ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်စက်
သြစတြေးလျတွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး။ The Jaguar Jay2သည်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ အလုပ်သင်များနှင့်အိမ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအကောင်းဆုံးသောစုံလင်သောစုံတွဲဖြစ်သည်။
Jaguar ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အနှစ် ၈၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောဥရောပရှိလူကြိုက်အများဆုံးဆံပင်ညှပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်အမင်းရေပန်းစားသောဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များကိုထုတ်လုပ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်နှစ်ဆင့်သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းချိုသာသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုရှာဖွေနေပါက Jay2ကတ်ကြေးများသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
✔️ အများဆုံးတတ်နိုင်အရည်အသွေးကို pair တစုံ
✔️ Bevel အစွန်းဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး
Jaguar နှစ်ပေါင်း ၈၀ ကျော်အထိအရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည်။ Jay 80 ဆံပင်ကတ်ကြေးများသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ ဤရွေ့ကားလွန်ခဲ့သော2နှစ်သြစတြေးလျအတွက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညှပ်တစ်စုံ။
Jaguar Jay2 ကတ်ကြေး
3. Kamisori ဓား Haircutting ညှပ်
အဆိုပါ Kamisori ဆံပင်သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးသောကတ်ကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Kamisori ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည့်အရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Sword သည် 440C ဂျပန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအမြင့်ဆုံး offset ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်အစားမှာ ၆ လက်မ၊ ၆.၅ "၊ ၇" နှင့် ၇.၅ "ဖြစ်သည်။
✔️ Sharp 3D ခုံးအနားသတ်ဓါး
Kamisori အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းတွင်လူသိများသောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကပရီမီယံဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်ဖို့အာရုံစိုက်တယ်။ The Kamisori ဓားသည်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရှည်လျားသောရှည်လျားသောဓားရှည်ဖြင့်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှို့ဆေးထားသည့်အရာဖြစ်သည်။
4. Juntetsu Offset ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး
ကျောက်တံတားတူ Yasaka, စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သောနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ Juntetsu Offset ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ကတ်ကြေးသည်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောညှပ်နိုင်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
ဤစာရင်းတွင်အကောင်းဆုံးသံမဏိဖြစ်သော Premium VG10 သံမဏိကို အသုံးပြု၍ Juntetsu offset ကတ်ကြေးသည်အပြောင်ဆုံးခုံးအနားသတ်ဓါးရှိသည်။
ရိုးရှင်းသော offset ပုံစံသည်သင့်အားပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချစဉ်အတောမသတ်ဖြတ်တောက်နိုင်စေသည်။ တိကျသော tension screw သည်အစဉ်အမြဲဖြတ်တောက်နေစဉ်ဤကတ်ကြေးများကိုချွန်ထက်စေသည်။
✔️ Sharpest ခုံးအစွန်းဓါး
✔️ အကောင်းဆုံး Value ကို
Juntetsu Offset ကတ်ကြေးများသည်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဂျပန်သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ တိတ်ဆိတ်သော်လည်းအခြားကတ်ကြေးများကိုအရှက်ရစေသည့်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်သြစတြေးလျအတွက်အသစ်အဆန်းများဖြစ်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်များ၊ အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခံရသည်။
5. Ichiro Offset ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာစေခြင်း
Ichiro အရည်အသွေးမြင့် 440C ခိုင်ခံ့သောသံမဏိဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးကိုထုတ်လုပ်သည်။ Ichiro ဖောက်သည်များထံမှကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့်အတူငွေစွမ်းအားအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။
Offset ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးပြီး Ergonomics offset ဒီဇိုင်းပါဝင်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်စောင်းတွင်ချွန်ထက်သောခုံး၏အနားသတ်ဓါးနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးသည် V-shaped သွားများကိုချောမွေ့လွယ်ကူသောပါးလွှာစေသည်။
Offset ဆံပင်ညှပ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲရောင်းထွက်ပြီးအမေရိကန်နှင့်inစတြေးလျတို့တွင်ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အစဉ်အမြဲရောင်းချသောအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။
✔️ Ergonomics offset ဒီဇိုင်း
အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့်ဆံပင်ဖြတ်ခြင်းကတ်ကြေးတပ်ဆင်ခြင်း။ Ichiro ၎င်း၏ကတ်ကြေးနှင့်အတူစတိုင်ထက်ပို။ ကယ်တင်တတ်၏။ ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းသို့ရောက်ရှိစေပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အားကတ်ကြေးဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။
Ichiro offset သတ်မှတ်မည်
6. Ichiro Set ဖြတ်တောက်ခြင်း Matte က Black ဆံပင်
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များများအတွက်ဝယ်လိုအားဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Ichiro သူတို့ရဲ့ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အနက်ရောင်ဆံပင်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောအရာနှင့်အတူ။
Premium 440C သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Ichiro ပိုပြီးစျေးကြီးတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးကျော်တက်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်လူကြိုက်များတဲ့ဆံပင်ကတ်ကြေးတပ်ဆင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီအစုမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သမားတို့အတွက် ergonomic ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်းပါဝင်သည်။ ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်တွင်ချွန်ထက်သောခုံးအနားများပါရှိပြီးပါးလွှာသောပါးလွှာသောလှုပ်ရှားမှုအတွက်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးသည် V-shaped သွားများကိုအသုံးပြုသည်။
သင်ကဘဏ်ကိုမချိုးဖောက်နိုင်တဲ့အနက်ရောင်ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါက Ichiro set ကိုစိတ်ပျက်မည်မဟုတ်!
✔️ ပရီမီယံ 440C သံမဏိ
✔️ Sharp ကခုံးအစွန်းဓါးနှင့် V-shaped သွားများ
Ichiroဒုတိယအကျော်ကြားဆုံးကတ်ကြေးသည် Matte Black ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ၊ စတိုင်ကျသောအနက်ရောင်ဒီဇိုင်းနှင့်ပညာရှင်ဆန်သောဒီဇိုင်းများ ဤရွေ့ကား USA နှင့်သြစတြေးလျအတွက်အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြသည်။
Ichiro Matte အနက်ရောင် Set
7. Mina Umi ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
အဆိုပါ Umi ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ အောက်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ အော့ဖ်ဆက်ဒီဇိုင်းနှင့်ချွန်သောခုံးအစွန်းရှိဓါးဖြင့်၎င်းအတွဲများသည်အကွက်အားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုသည်။
အဆိုပါ Umi ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ် ဦး လျင်မြန်စွာအစားထိုးနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသားတစ် ဦး သို့မဟုတ်အိမ်တွင်းဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
✔️ Professional ဒီဇိုင်း
✔️ Sharp ကခုံးအစွန်းဓါး
အဆိုပါ Umi ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးသည်ဒေါ်လာ ၁၅၀ အောက်သာလျှင်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ergonomic ဒီဇိုင်း၊ ချွန်ထက်သောခုံးအနားသတ်ဓါးနှင့်၎င်းကိုအလွန်လူကြိုက်များစေသည်။
Mina Umi ကတ်ကြေး
8. Jaguar ပန်းရောင် Pre Style Ergo ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်စက်
Jaguar ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးကိုဂျာမနီမှာလုပ်တယ်။ The Jaguar ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်သည်အရည်အသွေးကောင်းသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်နာမည်ကြီးသည်
အဆိုပါပန်းရောင် Jaguar Pre Style ကတ်ကြေးများကိုဂျာမနီနိုင်ငံတွင်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ၊ ချွန်ထက်သောဂန္ထဝင်ဓါးများနှင့်ရိုးရာလက်ကိုင်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
✔️ ဓာတ်မတည် - ကြားနေပန်းရောင်အပေါ်ယံပိုင်း
✔️ Professional က Micro-serrated ဓါး
Jaguar ကတ်ကြေးများသည်ဂျာမနီတွင်ပြုလုပ်သောဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင်ထူးခြားသောစတိုင်များ၊ ပညာရှင်ဆန်သော ergonomics နှင့်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်မှုများအတွက်သူတို့၏ဓါးသွားများပေါ်တွင်ချွန်သော micro micro serrations များရှိသည်။ အဆိုပါပန်းရောင် Jaguar ကတ်ကြေးများသည်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအရောင်ဖြစ်သည်။
9. Ichiro K10 ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်
Ichiro အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး VG10 သံမဏိကိုအသုံးပြုသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်ပြီးချောမွေ့သောဖြတ်တောက်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုကိုခွင့်ပြုသည်။
ပေါ့ပါးပြီး offset ဒီဇိုင်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ergonomics ကိုထုတ်လုပ်သည်။ သာလွန်သောမာကျောမှုနှင့်ဂျပန်ခုံးအစွန်းသည်အထိုးဆုံးသောဖြတ်တောက်မှုကိုပေးသည်။
✔️ ပရီမီယံ VG10 သံမဏိ
✔️ ဂျပန်ခုံး Edge Blade ကို
✔️ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ergonomics
Ichiro အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၄ င်း၏ပရီမီယံပစ္စည်းများ၊ အလွန်အစွမ်းထက်သောအနားများနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းများကြောင့်လူကြိုက်များသည်။ K10 Barber Shears သည်အကောင်းဆုံးသံမဏိကို အသုံးပြု၍ တိတ်ဆိတ်စွာဖြတ်တောက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။
Ichiro K10 ကတ်ကြေး
10 ။ Yasaka ဆံညှပ်
Yasaka ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကျော်ကြားဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောဂျပန်သံမဏိများကို အသုံးပြု၍ ဤဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း၊ Ergonomics ကိုထိမ်းသိမ်းထားသည့်၊ အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည် Yasaka ဘာဘာများညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ဆေးများသည်affordableစတြေးလျတွင်ရရှိနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးသောအမြင့်ဆုံးဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးဖြစ်သည်။
✔️ ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ
ရှည်လျားသောဓါးလှတ်ကိုရှာဖွေနေသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံသသမားများအတွက် Yasaka7"ညှပ်သည်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်ရရှိနိုင်သောစျေးအသက်သာဆုံးဂျပန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်5ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်
သင်ဆံပင်ညှပ်သူများအားလုံးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးခြေထောက်သည်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်နှိပ်ထားသူများသည်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အလုပ်ခွင်၌ဖြစ်စေ၊ အိမ်၌ဖြစ်စေဆံပင်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖြတ်တောက်ရန်အကြံပေးချက်များနှင့်နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။
သင်စတင်ရန်လိုအပ်သည်မှာ ကတ်ကြေးတစ်စုံ၊ ရေမှုန်ရေမွှားပုလင်း၊ ဖြီးတစ်ချောင်းနှင့်ကံကောင်းသောလူတစ် ဦး ကိုအနားရရန်ရှာဖွေနေသည်။
ဒီနေရာမှာမင်းတို့ရဲ့ကတ်ကြေးအသစ်တွေနဲ့ဆံပင်ညှပ်ဖို့ထိပ်ဆုံးအချက် ၅ ချက်ကိုလေ့လာကြည့်တယ်။
ထိုရေမှုန်ရေမွှားပုလင်းထဲမှ ထွက်၍ allရိယာအားလုံးတွင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သုံးပါ။ ဆံပင်ကိုစုပ်သို့မဟုတ်မစိမ်ရန်သတိထားပါ, ဒါပေမယ့်အလင်းမှုန်ရေမွှားသင်ဆံပင်အလွယ်တကူဖြတ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီး 2. ဖြီး
ဤသည်မည်သည့်ထုံးဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆံပင်ကိုဖြတ်ပြီးဖြီးတာကိုနောက်အဆင့်မှာဖြတ်ဖို့စီစဉ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်း၏အထူနှင့်အရှည်အပေါ်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးရနိုင်တယ်။
ဆံပင်areaရိယာတခုကိုဆုပ်ကိုင်ပြီးလက်ဝဲလက်ဖြင့် (လက်ဝဲလက်တစ်လက်ဖြစ်လျှင်လက်ချောင်း) ဖြင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့်စိုစွတ်သောဆံပင်ကိုစတေးပါ။
ဆံပင်တစ်ချောင်းသို့မဟုတ် ၂ လက်မအထိဆံပင်ညှပ်ရန်သင့်လက်ချောင်းထိပ်များ၌ထားလိမ့်မည်။
ထောင့်ဖြတ်ဆံပင်ညှပ်။ ထိုအခါဤအပိုင်းနောက်ကွယ်မှဆံပင်ဖမ်းပြီးအတူတူပင်ဖက်ရှင်အတွက်ဖြတ်တောက်ပါ။ သင်ခေါင်း၏allရိယာအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးသည်အထိဤအရာကိုဆက်လုပ်ပါ။
4. ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ချုံ့ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော
အကယ်၍ areasရိယာများသည်ထူလွန်းသည်သို့မဟုတ်ရှည်လျားလွန်းနေပါကသင်သည်၎င်းကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ဖြတ်သန်း။ ပြီးပြည့်စုံစွာဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
၅။ ဆံပင်အညှပ်များကိုချုံ့ခြင်း (Fringe)
သင်သွားနေသည့်ပုံစံပေါ် မူတည်၍ Bangs များကိုချုံ့ခြင်းသည်အခြားကျန်ခေါင်းများကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ သင်သည်ဆံပင်ကိုဖြိုချနိုင်သည်၊ မည်သို့ချုံ့ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
ဆံပင်ညှပ်ကိရိယာများကိုရှာဖွေသောအခါသင်သည် "ညှပ်" နှင့် "ကတ်ကြေး" နှစ်ခုလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သို့သော်ခြားနားချက်ကားအဘယ်နည်း။
ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်“ ကတ်ကြေး” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် ပို၍ အသုံးများသည်။ ဆံပင်ညှပ်တဲ့အခါမှာ "ညှပ်" ဟူသောဝေါဟာရကိုပိုမိုတွေ့ရသည်။
ညှပ်အားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုကြာရှည်ပြီးရှည်သောဓါး (၇ လက်မ) ညှပ်များသည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းပညာအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ထိုညှပ်အရွယ်အစားများသည်ဖြီးဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းပညာများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ကတ်ကြေးများသည်တိုတောင်းပြီးဆံပင်ညှပ်သောကတ်ကြေးအများစုသည် ၅ လက်မမှ ၆ လက်မကြားဖြစ်သည်။ ဤသည်ဆံပင်ပုံစံနှင့်တိကျစွာဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
ပါးလွှာပြီးစကူပစ္စည်းအရောင်များကိုကတ်ကြေး ဟူ၍ ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတို့၌သင့်ဖောက်သည်၏ဆံပင်ကိုပါးနပ်စေရန်အံသွားဆယ်ခုမှလေးဆယ်ကြားရှိသည်။
ညှပ်နှင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးနှစ်ခုလုံးသည်ခုံးများ၊ ခုံးအစွန်းညှပ်ဓါးသွားများသည်တိကျသောချောမွေ့သောဖြတ်တောက်မှုများအတွက်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့ချွန်စက်အားလုံးသည်ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အနားများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်သည်ကတ်ကြေးနှင့် Shears အကြားအနည်းငယ်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစားသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အများစုသည် ၄ ​​င်းတို့၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုသာကန့်သတ်မထားပါ။
နိဂုံး - ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးဆံပင်ကတ်ကြေးသည်အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Value၊ Affordable, Quality, Style နှင့် Reputation အပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ခြင်းကတ်ကြေးအပြည့်အစုံရှိသည်။
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး၏အရွယ်အစားကိုသင်၏အလယ်လက်ချောင်းကိုဓါးဖြင့်ပြန်ထားခြင်းအားဖြင့်သင်တိုင်းတာနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏လက်ဖဝါးအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်လျှင်သင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိသည်။ အမျိုးသမီးဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံသဆရာအများစုသည် ၅ လက်မမှ ၆ လက်မကြားကတ်ကြေးအသုံးပြုကြသည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံသသမားအများစုသည်လက်မ ၆ လက်မမှ ၇ လက်မကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုကြသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ဆံပင်ကတ်ကြေးတစ်စုံလျှင်ပျမ်းမျှဒေါ်လာ ၁၅၀ မှ ၄၀၀ ကြားပေးဆပ်နိုင်သည်။
ကျောင်းသားများနှင့်အိမ်မှဆံပင်အလှပြင်သူများအတွက်သင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ၂၀၀ အထိပေးဆောင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ကြေးလေးများကိုအမြင့်ဆုံးပေးသည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ခြုံငုံ။ ဂုဏ်သတင်းနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်တို့အပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးဂျပန်စတိုင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း ဤနေရာတွင် JapanShears.com.au တွင်ဖတ်ပါ
သြစတြေးလျရှိဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ပလိပ် ၁၀ ခု | ဤနေရာတွင် ScissorHub.com.au တွင်ဖတ်ပါ
ယူအက်စ်ရှိအကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ် ဤနေရာတွင် JPscissors.com မှာဖတ်ပါ
အကောင်းဆုံးဂျပန်စတိုင်ဆံပင်ညှပ် ဤနေရာတွင် BarberScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
အလှပြင်ဆိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ် ဤနေရာတွင် SalonScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
နယူးဇီလန်တွင်အကောင်းဆုံးဂျပန်စတိုင်ဆံပင်ကတ်ကြေး HairScissors.co.nz တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
အကောင်းဆုံးဂျပန်ကနေဒါဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်း | ဤနေရာတွင် JapanScissorShop.com တွင်ဖတ်ပါ
သြစတြေးလျရှိဆံပင်ကတ်ကြေး HairScissors.com.au တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ကတ်ကြေး ScienceDirect.com တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
ဆံပင်ညှပ်သမားများအတွက်ကတ်ကြေးနှင့်ဆက်စပ်သောဒဏ်ရာ | ScienceDirect.com တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
အလှကုန်ဆံပင်ညှပ်သင်တန်း ဤနေရာတွင် ERIC.ed.gov တွင်ဖတ်ပါ
ဂူဂဲလ်မှဆံပင်ညှပ်ခြင်း Springer.com တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
စက်တင်ဘာလ 04, 2021
ဆံပင်ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးအသစ်များအတွက်ဆံပင်ဖြတ်တောက်နိုင်သောကတ်ကြေးအသစ်တစ်အုပ်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်ဤနေရာတွင်အလွန်အထောက်အကူပြုသောစုဆောင်းရေးကတ်ပြားစုဆောင်းခြင်း။ လူတွေကမင်းဒီမှာရွေးလို့ရတဲ့ကတ်ကြေးတံဆိပ်အမျိုးမျိုးကိုငါကြိုက်တယ်။ ဤကဲ့သို့သောစာရင်းတစ်ခုတွင်အမျိုးအစားများစွာရှိသည့်အခါငါပိုကြိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ဤစာရင်းထဲသို့ ၀ င်သွားသောအတွေးအချို့ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဆံပင်ဖြတ်တောက်ကတ်ကြေးတစ်စုံစီအကြောင်းဒီစိတ်ကူးစာရင်းနဲ့အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီနှစ်မေလမှာအလှအပကျောင်းပြီးတာနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စည်းအချို့ ၀ ယ်ဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့နည်းနည်းကြိုးစားခဲ့တယ်။ ငါစျေးကွက်မှာအကောင်းဆုံးကတ်ကြေးအချို့ကိုသေချာလိုချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကကြီးမားတဲ့အကူအညီတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး online မှာလွယ်လွယ်ကူကူအော်ဒါမှာနိုင်မယ့်ကွဲပြားတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေကိုကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဤနေရာတစ်ဝိုက်ရှိစတိုးဆိုင်များအားလုံးသည် COVID-19 မှထူးဆန်းသောနာရီများရှိနေသေးသဖြင့်အွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ခြင်းသည်ပိုလွယ်ကူပြီးပိုလုံခြုံသည်။ ငါငါ့ကိုယ်ငါတစ်စုံယူမယ် Yasaka ယခုကတ်ကြေး
Ridge Harris က
ယခုကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာအလှပြင်ဆိုင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်နေပြီ ဖြစ်၍ လူများစွာသည်သူတို့၏ဆံပင်ကိုညှပ်နေခြင်းကိုတွေ့မြင်နေရသည်။ ၎င်းသည်ခဏတာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသောဆင်းရဲသား stylist များအတွက်ကောင်းသည်။ လူတွေဟာလှပတဲ့အကြည့်ကိုကြည့်နေကြတယ်။ ငါမပျော်နိုင်ဘူး။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး (၁၀) ခုစာရင်းသည်ကောင်းသောကိရိယာများသည်အရာရာကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တက်နိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်များနိုင်သည်ကိုသတိပေးသည်။
ငါ့မှာဆံပင်အလှပြင်သင်တန်းကျောင်းကနေဘွဲ့ယူတော့မယ့်ဆွေမျိုးတစ်ယောက်ရှိပြီးသူတို့ကိုအရည်အသွေးမြင့်တဲ့ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးအချို့ပေးစေချင်တယ်။ ငါမတူညီသောအတွဲအချို့ကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်သူတို့နှင့်အတူစျေးဝယ်ရန်ငါအကြံပြုလိုပါသလား။ သူတို့အတွက်မသင့်တော်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဝယ်ချင်တာကိုငါမုန်းတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဖို့အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကတ်ကြေးနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်မဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူး။
ဇူလိုင်လ 09, 2021
ကျွန်ုပ်၏စတိုင်လ်၏ကိရိယာများမည်မျှကုန်ကျမည်ကိုကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှစဉ်းစားဖူးပါလိမ့်မည်။ သူမသည်စိတ်ကူးယဉ်အလုပ်ကိုလုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းငါကတ်ကြေးကိုအနီးကပ်မကြည့်ပါ။ အခုတော့အကောင်းဆုံးဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ကြေးတံဆိပ် ၁၀ ခုကိုငါတွေ့ပြီ။ သူမသုံးတဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့သူဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ ဒီစာရင်းကိုအခြေခံပြီး၊ stylist တွေအတွက်အဓိက overhead တွေရှိနိုင်တယ်။ ဝိုး!